Bacda meeldhexaadka ah ee la daboolay, Bacda Duffle, Bacda Dharka - Toosan
Bag Boorsada Canvas
Boorsada Boorsada Cuntada ee Eco saaxiibtinimo leh
Bacda Boorsada Cotton Cute
Bacda dharka lagu dhaqdo
Changzhou Saxan Xidhmada Co., Ltd.
Xirmo Sax ah
Waxaad u isticmaali kartaa sida boorsada gacanta ugu sareysa, ama boorsada garabka, ama bacda iskutallaabta adigoo ku qaadaya dusha sare ama xiraya suunka la hagaajin karo Dhammaan boorsada dharka lagu dhejiyo ee jaranjarada waa la habeeyay.
Bacda jiifka ee jimicsiga ayaa alaabtaada gaarka ah u habeysa si habsami leh. sii boos fara badan oo lagu keydiyo qalabka jimicsiga, qalabka jimicsiga, dharka dheeriga ah, dhalo biyo ah, gogoshaada, tuwaallada, iyo waxyaabo kale oo badan.
Macaamiisha ha ku raaxaystaan
alaabada ay isticmaalaan
faahfaahin faahfaahin hubinta tayada
Xirmada saxda ah waxay ahayd mid la aasaasay oo la aaminay sidoo kalena BSCI oo hantidhawre ah wax ka badan 10 sano, waxaan inta badan ku jirnaa baakadaha tafaariiqda & baagaga xayeysiinta oo leh qiyaastii 100 shaqaale ah iyo 3000 warshad dhisme mitir laba jibbaaran ah, waxaan sidoo kale ku faanaa noocyada badan ee bacaha xirmada waxaad ka heli doontaa buugyarahayaga. Uruurinta boorsooyinkayagu waxay ku yimaadaan midabbo badan waxaana lagu sameeyaa waxyaabo ay ka mid yihiin Non Non toven, PP Woven, RPET non toven, Polyester or Nylon, Canvas & Cotton, Jute & Bamboo, Neoprene, PVC, PEVA and Paper etc.
Waa maxay bacda dharka lagu dhaqo ee mesh?
Waa maxay bacda dharka lagu dhaqo ee mesh? Hawsha boorsada dharka lagu dhaqo ayaa ah inay ka ilaaliso dharka, rajabeetada iyo nigisyada inay isku xidhaan markay wax ku maydhayaan mashiinka dharka lagu dhaqo, iska ilaali inay duugoobaan, sidoo kalena waxay ka ilaaliyaan dharku inay xumaadaan. Haddii dharku leeyihiin jiinyeer bir ah ama ...
Sidee loo doortaa bacda duffle?
Boorsada safarka ee la qaadan karo ayaa la sameeyay waa polyester iyo nylon, waxaana sidoo kale loo oggol yahay in lagu qaabeeyo dhammaan qaababka iyo midabada. Xaqiiqdii, boorsada duffelku waxay ku sii adkaaneysaa dumarka iyo ragga. Bacda duffel waxay keydin kartaa ku dhowaad wax kasta sida dharka, kabaha, timaha iyo gadhka ...
No.2, Waqooyiga Caohe Road, Magaalada Xuejia, Degmada Cusub, Magaalada Changzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha.